National Conference: Marketing ary Plenary Sessions' Phone-In fandaharan'ny Radio Faritra
National Conference: Barotra sy Plenary Sessions 'Phone-In Radio Broadcast ampahany
Posted by: Anie Anokuru Oktobra 16, 2013
Mifanaraka amin'ny tapaka barotra milaza ny manao anjara amin'ny ezaka rehetra saika eo amin'ny fiainana, ary toy ny tany an-tsaha guru, inona no soso-kevitra mifandraika-barotra(S) azonao tonga amin'ny fandoroana ankehitriny manoloana ny olana iray sort-be taorian'ny Conference-pirenena ao Nizeria, izao fa ny mpanolotsaina komity dia nivoatra fombafomban noho ny kickoff ? - Ambrose Eniolorunda.
I foana manontany tena momba ny guru kely izay izao toa hahazo tany. Na izany aza, Mety ho ny Tsitoha Andriamanitra handray ny voninahitra. Misaotra an'Andriamanitra aho noho izany koa ho toy ny fitaovana andry maneho hevitra, tahaka Ahy tsy fahafahana antoka raha ho avy ny fomba fandraisana anjara mivantana na inona na inona na oviana na fihainoana-bahoaka (na amin'ny fivoriana Plenary ho toy ny solontena) ny National Conference. Na dia izany aza, Hitako ny Filoha Goodluck Jonathan ny fahendrena amin'ny naneken'izy ireo ny tabataba ny Nizeriana noho izany tena mahay-tapaka lalan-dra eo amin'ny barotra. Manatona izany foto-kevitra avy amin'ny roa 'barotra mifandraika' fijery, ireo mitsangana ho ahy: (ny) Fanoroana hevitra fohifohy Mr. Filoha mifanaraka amin'izany, ary (amin ') Toroy hevitra fivarotana ny foto-kevitra momba ny Conference-pirenena amin'ny alalan'ny fampidirana ny finday-in fampitana onjam-peo toy ny ampahany ao aminy Plenary fivoriana.
Manontany tena aho hoe inona koa te-'tsena' ny Filoha mihoatra noho ny toe-javatra foana izy famantarany zavatra iray tso-po 'mpanamora' ity mialoha be National Conference, satria tsy nandeha ny fomba mamitaka ny mpitondra taloha. Fantatsika fa ny mpitondra teo aloha nilalao "boju boju" (an-kiafina) toy izany, ary na oviana na oviana antoka fa manao ny marina sy ny governemanta tsy fitsabahan'ny nilalao avy. Manamarina ny mangarahara sy mahomby fihaonambe mijoro ho laharana voalohany barotra fitaovana ho an'ny filoha ity, toy ny fallout dia ho "Ny Filoha Izay nanao azy Ela!" lasa enviable marika ho azy taty aoriana.
Ny fanetren-tena soso-kevitra io komity Mpanolo-tsaina dia ny fahazoan-dalana hidirana ny fampidirana ny telefaonina-in-pirenena fivoriana fandaharana amin'ny onjam-peo, izay tafiditra ao amin'ny Conference-pirenena ny Plenary. Izany dia mahatonga ho barotra sehatra mba hanandratra ny 'matoky haavon'ny' ny Nizeriana manatrika ity fanangonana. Tsy voatery ho clairvoyant ny decipher fa hisy faobe liana mankany mitranga ao amin'ny amin'izao fihaonambe. Tena maro tokoa Nizeriana dia mangidihidy na inona na inona afaka ho anjara biriky - hevitra tsara afaka ny ho tonga na aiza na aiza.
Toy ny rehetra tsy afaka ny ho solontena, Mahatsapa aho fa maro be ny Nizeriana ho mampiahiahy fa tsy azo inoana solontena maneho sy iniana rehetra ny olona tokoa ny zavatra faniriana. Izany no manoro hevitra fa ity io komity dia tokony ahitana ampahany, izay antsointsika hoe ny hoe: Avy amin'ny efajoro 'barotra fomba izay tsy mbola nampiharina ao amin'ity firenena ity, mba hanatsarana izany National Conference - A indroa isan-kerinandro, adiny roa ny fandraisana anjara mivantana amin'ny vahoaka Nizeriana, amin'ny alalan'ny fampidirana ny finday-in-pirenena fandaharana radio, ho toy ny ampahany ao aminy Plenary fivoriana. Toy izany dia azo antoka fa hanamora ny manipy ny "Inona no tena adalaina Nizeriana".
Tokony ho nahatsiaro fa tompon'ny ny finday dia saika na aiza na aiza; ny takatry ny fandefasana onjam-peo dia saika ny firenena iray manontolo, miaraka antoka faobe liana, sy ny fandraisana anjara (satria tena ilaina rehetra amin'ny barotra). Ary, endrika fandaharana toy izany dia hahatonga ny mangarahara eo alohan'ny olona.
Fombafomban ho an'ny onjam-peo fandaharana
– Tokony ho eo ambany fiahian'ny ny Broadcasting Organization of Madagascar, TSARA, nakany ny endriky ny an-tariby-in onjam-peo fandaharana izay Manome ny vahoaka ny fahafahana hanao anjara biriky ho voafaritra tsara ny fifanakalozan-kevitra lohahevitra. Izany dia azo antoka fa hanome hiainana ny fanirian'ny maro Nizeriana, izay mety ho faniriany, nefa tsy manome-feo mivantana ny fihaonambe.
– Ny fandaharam-potoana dia tokony ho velona, fifandraisana sy unedited. Olom-pehezin'ny adihevitra dia tokony ho mifanaraka amin'ny olana manokana amin'izao fotoana izao satria délibérés eo (na zava-dehibe hafa), amin'ny andro iray ihany fa ny fandaharana dia ho alefa.
– Anjara ny BON mahatonga ny fandraisana anjara midadasika kokoa (ny alalan 'Hook-Up') amin'ny tsy miankina, -pirenena, ary Hoy ny-nanana radio.
– Program tokony ho faharetan'ny tokony ho ora roa, manana tena za-draharaha Moderators / mpanolotra (ho lahy sy vavy), avy isan-karazany mandray anjara radio, maka ho mpiadidy ny amin'ny fotoana samihafa.
– Onjam-peo ity dia tokony ho alefa fandaharana mandritra ny fotoana ampahany izay mampirisika ny daholobe tombontsoa sy ny anjara. 11aho - 1 ora atoandro ny fehikibo, amin'ny andro fiasana, dia tena mety. Na izany aza, ny fihaonambe hafa afaka manapa-kevitra ao anatin'ny fe-potoana tsara ny fandaharam-potoana mba 'hihaino' tsy tapaka ny torohevitra avy amin'ny olona, amin'ny alalan'ny onjam-peo ity ampahany.
koa, mpiantso ny fandaharam-potoana dia tokony haka ny vola lany amin'ny antso. Tsy tokony hisy mivadika fiampangana, ho toy ny fomba fanetezam ny isan'ny mpihaino amin'ny lafiny sasany (sy ny fisorohana ny fahasorenana-bahoaka avy amin'ny 'hipoka' telefaonina). Fanomezana ho tokony na ho amin'ny teny Anglisy na Pidgin anglisy (ny Lingua Franca ny ifotony). Commercial fiatoana dia tokony hahazo ny, mandritra izany fotoana izany onjam-peo samihafa izay hahazatra ny '' dia afaka nandefa dokam-barotra ny mpanohana an-toerana.
Iza no milaza fa tsy azo antoka loharano fidiram-bola goavana ho an'ny onjam-peo, tahaka ny mpanohana (izay hamantarana izany "toeram-pitrandrahana volamena ') dia scramble mba hametraka barotra? raha tianao, -peo isan-karazany afaka namerina misy ny fandaharana ny andro, araka ny voarakitra / natontan'i dikan, na manao rakitsary avy toy ny fitaovana vaovao ho an'ny ny fihinanana ny mpihaino ny fandrakofam-baovao ao anatin'ny faritra. Attention mankany amin'ny toy izany National Conference, toy ny World Cup, dia 'andriamby' for barotra, amin'ny mazava mahasoa vokany noho ny mpikarakara, TSARA, rehetra ny mandray anjara radio; orinasa izay mampiasa izany ho tosika ho an'ny fampiroboroboana; ary amin'ny farany Nizeria.
Aoka ianao ho voalohany haneho hevitra amin'ny "National Conference: Barotra sy Plenary Sessions 'Phone-In Radio Broadcast ampahany"